ရေစာ - Sandwich ကိတ်မုန့် လူတိုင်းအတွက်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ဂလာစားပွဲကိုကြည့်ပြီးအသားညှပ်ပေါင်မုန့်ပုံစံဖြင့်မူလခံတွင်းစားသုံးစေသောအရသာကိုမြည်းကြည့်ခြင်းသည်ကောင်း၏။ ဒီပန်းကန်ကချစ်စရာကောင်းတယ်၊ အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ကိုသုပ်ကျွေးဖို့ကောင်းတဲ့အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်။
စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောပန်းကန်သည်ပျော်ပွဲစားပျော်ပွဲစားအတွက်၊ ကျောင်းနံနက်စာ၊ အလုပ်ခွင်တွင်နေ့လည်စာ၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောရုပ်ရှင်ကိုကြည့်သည့်အခါရေစာစားရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
လိုအပ်သည့်ထုတ်ကုန်များ - 400 gr ။ ဂျုံမုန့်, ​​150 ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ ဝက်အူချောင်းသို့မဟုတ်ဝက်ပေါင်ခြောက်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့အရောအနှော, 100 ဒိန်ခဲသို့မဟုတ် feta ဒိန်ခဲ, 100 gr ။ Sala, 1 ကြက်ဥ, 50 ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ ထောပတ်။
ချက်ပြုတ်ခြင်းအစီအစဉ်။ ဂျုံမုန့်ကိုတစ်ဝက်ပိုင်းခွဲပြီးအစအနတွေကိုဖယ်ထုတ်ပြီး 1,5-2 မှာကြည့်ပါ။ အစေ့ကို grater ပေါ်မှာပွတ်ပေးပါ။
လိုအပ်သောထုတ်ကုန် - ဝက်ပေါင်ခြောက်, ဝက်အူချောင်း, feta ဒိန်ခဲသို့မဟုတ်ဒိန်ခဲ, ဝက်ဆီ, အနည်းငယ်မုန့်, ​​ကြက်ဥ, mashed အစအန - ညှစ်, အမဲသား grinder နှင့်အတူကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်။ ရရှိသောအရောအနှောကိုရောမွှေပါ။ တစ်ဝက်ကိုပေါင်းပြီးအထူကိုစက္ကူနဲ့ထုပ်ပြီးရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ပါ။ အသုံးပြုသောအခါ, ကိတ်မုန့်ပါးလွှာသောအချပ်သို့ဖြတ်ရ၏။
ထုတ်ကုန်များရရှိမှုအပေါ် မူတည်၍ အရောအနှောပါဝင်မှုများကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အရသာရှိသောသားညှပ်ပေါင်မုပြုလုပ်ရန် TOP5 နည်းလမ်းများ
ပီဇာသည် 10 မိနစ်အတွင်းတည်ရှိသည်
အခါသမယများအတွက်အသားညှပ်ပေါင်မု - ဗီဒီယိုနှင့်အတူစာရွက်!
ကိတ်မုန့် "Dobryninsky" စာရွက်?
ဂဏန်းချောင်းမှ Raffaello - အမြန်ဆုံးနှင့်အလွယ်ကူဆုံးရေစာစာရွက်
meringues နှင့်အတူသံပုရာကိတ်မုန့်: ဓာတ်ပုံနှင့်အတူစာရွက်။ သံပုရာ cream နဲ့ meringue နှင့်အတူကိတ်မုန့်
26 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,243 စက္ကန့်ကျော် Generate ။